एउटा घर जुन दुईवटा देशको सिमानामा छ, फरक ढोकाबाट गए अर्कै देश पुगिन्छ – List Khabar
Home / रोचक / एउटा घर जुन दुईवटा देशको सिमानामा छ, फरक ढोकाबाट गए अर्कै देश पुगिन्छ
admin November 3, 2021 रोचक Leaveacomment 83 Views
मंगलले गर्दै राशि परिवर्तन, यी ४ राशिलाई अशुभ !
केटा मान्छेले से,,,क्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ४ गल्ति…
एजेन्सी । विश्वमा सिमानाका कारण ठूला युद्ध भएका कैयौँ उदाहरणहरु छन् । तर एउटै घर दुईवटा देशमा पर्छ भन्दा धेरैलाई पत्याउन मुस्किल पर्छ ।बेल्जियसको बार्ले–नस्सो र नेदरल्याण्डको बार्ले–हेर्टोगको सीमामा यो घर जुन तस्विरमा देखिएको छ यो देख्दा सबै चकित पर्छ ।
बेल्जियम र नेदरल्याण्डलाई भिन्न गर्नका लागि बार्ले–हर्टोग गाउँमा पेन्टमार्फत एउटा लाइन कोरिए पनि यो एउटै घर भएपछि यसको दुई ठेगाना छ । साथै, एउटै ढोका हुँदा पनि दुईवटा घण्टी राखिएका छन् । गलत घण्टीले तपाईंलाई अर्को देशमा पुर्याउनेछ । जहाँ जाने जो कोहीले पनि निकै शर्तकता अपनाउनुपर्छ ।
यो पनिपढ़नु होस:हाम्रो वरिपरी नै धेरै चमत्कारिक औषधी हुन्छन्, जुन हामी दैनिक रूपमा हाम्रो घरमै प्रयोग गर्दछौ, तर यसको गुणहरूबारे अनजान रहेकोले हामी अझै पनि यसको प्रयोगको सही विधिहरूबाट अछूत छौ।
लसुन र मह यस्तै औषधीमा पर्छन्। यी दुबैलाई रोगहरूको उपचारको लागि सबैभन्दा पुरानो औषधी मानिन्छ।यिनीहरुमा पाइने एन्टिबायोटिक, एन्टिफंगल र एन्टिअक्सीडेन्ट गुणहरूले हाम्रो शरीरलाई थुप्रै रोगहरूबाट जोगाउँछ।
प्राकृतिक गुणको धनी यो मिश्रण एक प्राकृतिक डिटोक्स मिश्रण हो, जसको सेवनले शरीरका विषाक्त पदार्थहरू र दूषित पदार्थहरू हटाउँदछ र हाम्रो शरीरलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ राख्छ। यसको सेवनले अन्य विकारहरू हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ।
Previous भोलि कार्तिक १७ गते बुधबार ,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल!
Next यो कुकुरले बाघको पनि काम गर्न सक्छ,, सत्य थाहाँ पाउँदा सबैको होस उड्यो
हनिमुन मनाउँदा एक रातमा ५ वटा पलङ भाँचेको यो जोडीले बिहे लगत्तै घ’टायो पूरा हेर्नुहोस् …